Kedu ihe kpatara anyị Mingwang？ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Ndi otu anyi
Ngwa Ule Mingwang
Kedu ihe kpatara anyị Mingwang?
Mmiri mmiri mmiri
Pipe ọkwọ ụgbọ ala
Teepu Nweta Ugboro abụọ
Teepu Micro Micro
Onye na -ete ihe
Fogger & igwe
G Ụdị Sprinkler
Mmetụta Mgbasa Ozi
Mgbochi Mgbochi Ụmụ ahụhụ
Ngwa & Valves
Ngwa dabara adaba maka tubing
Mkpọchi Nut Fittings N'ihi ntapu teepu
Mkpọchi mgbanaka mgbanaka maka teepu ntapu
Mini valvụ N'ihi ntapu Mezie
Obere valvụ N'ihi tubing
Ndị Drippers n'ịntanetị
Ihe nzacha & Venturi Fatịlaịza Injector
Ngwa usoro FAQ
Mmiri ntapu mmiri usoro Ajụjụ
Usoro nzacha Ajụjụ
Micro spray mpaghara Ajụjụ
Ajụjụ Drippers n'ịntanetị
Ịkwanyere sooks usoro FAQ
Sprinkler usoro Ajụjụ
NETWOR ahịa ahịa ụwaK
Na ahịa esenidụt, Mingwang eguzobela netwọ ọrụ ahịa tozuru etozu n'ihe karịrị mba na mpaghara 100 gburugburu ụwa.
Onye na-ebubata ihe mmiri na China nke ọma
• 24/7 ọkachamara nkwukọrịta.
Anyị nwere ndị otu dị elu, ndị otu nyocha sayensị na ndị ọrụ nka.
Nnyefe ọsọ ọsọ
• nnyefe ọsọ ọsọ, oge nnyefe kwụsie ike.
Ndị ọrụ otu
A na -enyekwa ọrụ ahịa iji hụ na ị nwetara ahụmịhe ịzụ ahịa na -atọ ụtọ nke ọma na anyị.
1.Kedu ọrụ Mingwang na -enye?
Mingwang na-enye ahịrị mmepụta maka okirikiri, dị larịị, mgbidi dị larịị na ọkpọ ọkpọ mmiri mmiri siri ike yana maka teepu mmiri mmiri mmiri, PE na ọkpọkọ PVC. Anyị na -erekwa ndị na -agba mmiri ịgba okirikiri ma dị larịị ma na -enye ọtụtụ ọrụ site na atụmatụ atụmatụ zuru ezu ruo ịzụta ngwaahịa irighiri mmiri; Mingwang na -ahụ maka nrụnye na ọzụzụ ndị ọrụ na nkwado na -aga n'ihu na teknụzụ ọgbara ọhụrụ iji mee ka ị bụrụ asọmpi n'ahịa mpaghara na nke ụwa taa. Ị nwere ike bụrụ onye nrụpụta nnwere onwe zuru oke nke ọkpọ mmiri mmiri mmiri, teepu mmiri mmiri mmiri, ọkpọkọ PE na ọkpọkọ PVC na Mingwang
2.Gịnị kpatara Mingwang?
Mingwang nwere ihe karịrị afọ 35 nke ahụmịhe n'ichepụta mmiri mmiri na PE, mmịpụta ọkpọkọ PVC. Anyị etinyela akụrụngwa maka ihe karịrị otu narị ụlọ ọrụ ama ama ma nyere ndị ahịa aka ịhazi ụlọ nrụpụta.
Anyị na -enye igwe dị elu, oke ọsọ, igwe mkpọmkpọ ebe na -elekwasị anya n'ịdị mfe na ịdị mfe nke iji dabara maka obere ndị ọrụ. Igwe anyị anaghị arụ ọrụ nke ọma, a nwalere ya n'ọhịa iji nagide ọnọdụ ụlọ ọrụ. Mgbe ịzụtara n'aka Mingwang, ọ bụghị naanị na ị na -enweta igwe dị mma, mana nkwado ọkachamara na -aga n'ihu site n'aka ndị otu anyị na -enyere gị aka ime nke ọma.
Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., LTD guzobere na 1985 ...
Baoding City, Mpaghara Hebei, China